Ndị a bụ ngwaọrụ abụọ nwere ike ime Nexus 2016 site na HTC | Gam akporosis
Ya mere, ndị ọhụrụ HTC Nexus 2016
Nyaahụ anyị mụtara na HTC na-enwe ezigbo ọmarịcha oge Ogbenye HTC 10 ahịa ọgụgụ nke rere ihe kariri nde 1 n'uwa dum. A mara mma nwa ndise na-ọkọnọ na Taiwanese emeputa ezie, ekele gị VIVE mebere eziokwu ngwaọrụ, enwere ike m nwere ike gwọọ ọnya ndị ahụ e mepụtara maka ụfọdụ smartphones ndị na-enweghị ike ịchọta igodo ziri ezi iji mejuo ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa. Ọnụahịa dị elu nke HTC 10 emerụla onye ọrụ ahụ ahụ nke ukwuu na ọ nọ na-atụ anya smartphone dị elu site na ụlọ ọrụ a yana otu mgbe ị na-enyocha ahịa ndị ahụ dị ala.
Ugbu a bụ mgbe ndị uwe ojii gam akporo wepụtara ihe ngosi nke ihe Nexus 2016 ọhụrụ, Sailfish na Marlin ga-adị ka, dịka ozi ha nwere site na isi iyi a pụrụ ịdabere na ya. Anyị anaghị eche ihu ịkọ akụkọ, mana ntụrụndụ nke ihe Nexus abụọ na-esote ga-abụ. Nwere ike hụperetụ a doo anya na imewe na ihe dị iche na ihe bụ Nexus 5X na Nexus 6P nke nke Huawei kere site na ogwe ahụ dị na ojii nke mere ka ọ dị iche na ọdụ ndị ọzọ dị na Android. Ugbu a bụ mgbe ha chọrọ ịkọwa ọdịiche nke Nexus a na nhazi doro anya yana na azụ ahụ nke kewara abụọ na akụkụ ojii dị elu nke na-ewe ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ohere ahụ.
Usoro ikpeazụ nke ekwentị Nexus abụọ a nwere ike gbanwee, mana enwere akụkụ ụfọdụ ga-adị na mbụ, yabụ anyị nwere ike mee ezigbo echiche nke kedu ihe igwe abuo nke HTC gha eme.
Nkọwa kachasị mkpa bụ na igwefoto azụ a gaghị enwe overhang dị ka ọ na-eme na ekwentị ndị ọzọ dị ka Samsung Galaxy S7 nke oghere na-apụ apụ. Na azụ nke ekwentị ị nwere ike ịchọta ụda abụọ na elu nke na-ewe otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ohere. Nkọwa ọzọ nke azụ ahụ dị n'ụdị gbagọrọ agbagọ n'akụkụ, na nyocha mkpịsị aka dị n'etiti. A makwaara na ahụ ga-adị na aluminom.
Interestingzọ na-adọrọ mmasị ịmatakwu banyere ihe ọdụ ụgbọ ọhụrụ abụọ a ga-abụ. kwesịrị ịbịa na ngwụsị oge ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nexus » Ya mere, ndị ọhụrụ HTC Nexus 2016
Nintendo nwere ike ịbanye n'ahịa maka ndị na-ahụ maka ekwentị